APEX IMIQATHANGO EBALULEKILEYO
I-Apex Legends ngumdlalo omkhulu owazisa ngesitayile esitsha somdlalo weqonga labaphembeleli. Ukudityaniswa kunye ne-Apex Legends Hack, akukho mntu kule planethi onokukugcina uqulethwe!
Sele uthenge i-Apex Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-Apex hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Ipepe Hacks
Midnight lomnqweno yimfumba
Thenga Ipepe IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo olungileyo ujonge kuwo, sinokhetho olukhulu esinokukhetha kulo!
Zininzi ii-hacks ekufuneka uziqwalasele, ke kuyakufuneka ukhethe efanelekileyo ehambelana neemfuno zakho.
Zonke iintlawulo zethu zenziwa zodwa kwaye zikhuselekile, zigcina abasebenzisi bethu bekhuselekile
Ngoku ukuba uthenge isitshixo semveliso, ungayisebenzisa ukukhuphela ii-Apex Legends Hacks zethu.
Kutheni usebenzisa iGamepron Apex Legends Hacks?
I-Apex Legends yeXesha le-10 sele ilapha kwaye abadlali bonwabile ukufumana izandla zabo kumdlalo omtsha weLegend, iMboni. Umboni uyilelwe ukufumana ulwazi oluninzi malunga notshaba kangangoko, njengoko igama lakhe lingacebisa. Uxhotyiswe ngenzwa yokubetha kwentliziyo, iidrones, kunye nendlela yokubona iinyawo zotshaba.
I-Apex Legends ihlaziyiwe amaxesha ngamaxesha kuwo wonke umjikelo wobomi bayo kangangokuba ezinye iimephu zenziwe ngokutsha izihlandlo ezininzi, kwaye iWorlds Edge yenye yazo. Imephu ibangelwa luhlaziyo lwayo lwesithathu ngohlaziyo olulandelayo kwiiNgcaciso ze-Apex, kwaye yonke imiqondiso yalatha ukuba itshatyalaliswe okanye yonakaliswe kwimeko elandelayo.
I-Apex Legends ibinomlingiswa owaphukileyo ukusukela ngoMeyi ubuncinci, kunye nezicingo zikaWattson ezingakwenzi oko bebefanele ukukwenza. Ngokuhlaziya i-1.69, ii-wattson mains ziyakonwabela ukuva ukuba iingcingo zazo ngoku ziya kuba nakho ukucothisa abadlali ngokukuko ngakumbi, zisenza iWattsone ibe ngumxhasi oyingozi kulawulo lwezihlwele.
I-Apex Legends ngumdlalo omtsha we-Battle Royale ekuvumela ukuba udibane nabanye abahlobo abaninzi kwaye ubakhuphele edabini. Uya kufunda ngokukhawuleza ukuba abanye abalinganiswa banamandla kakhulu kunabanye, kwaye oku kuthetha ukuba uza kutsalela ekusebenziseni ngakumbi - abadlali bathe abanye abalinganiswa babonakala "boyisiwe", ngamanye amaxesha kuyakuvakala ngathi kunyanzelekile Joyina ukukopela okanye ufe nje uzama rhoqo. Ukukopela kuza kuza kwiindidi ezahlukeneyo, kwanenani lezinto ezikhoyo ngaphakathi kwiNgcaciso ye-Apex Legends ye-Apex inokwanela ukukucenga ukuba ungene kwi-Dark Side! Awuzange ube nethuba elikhulu lokudlala ngelixa udlala umdlalo wevidiyo, uninzi onokuthembela kulo.
Asiboneleli nje abathengi bethu ngesixhobo esingenamathambo oya kuthi usibone kuyo yonke i-intanethi, sinikezela nge-Apex Legends Hacks ezizodwa eziza kukuguqula ube ngumatshini wokuphumelela ongapheliyo. Wonke umdlalo omnye uza kuphela kunye nawe phezulu ngenxa yokuba i-Apex Legends hack yethu yenzelwe ukulawula isiphumo somdlalo wonke. Ngokuthandwa kwe-Apex Legends Aimbot, i-ESP, i-NoRecoil, kunye nezinye izinto, akukho nto ichazayo ukuba uza kuba nempumelelo engakanani xa usebenzisa ii-cheats zethu.
Ukuba ubukhe wadlala i-Apex Legends kwixa elidlulileyo kwaye unamava angaphantsi kwe-stellar, kunokubakho isizathu esihle soko. Abadlali abaninzi bakwazile ukuphucula izakhono zabo kunyaka ophelileyo okanye njalo, kwaye ngenxa yoko, baninzi abadlali abakumgangatho ophezulu kumdlalo. Ukuba uyikhetha okokuqala le nto inokudimaza ngokumangalisayo, njengoko abanye abadlali bengazikhathazi ngokunika umdlalo ithuba lesibini emva kokukhupha impumelelo yabo yokuqala. Akukho kukrwitshwa kwisangqa sokugqibela xa i-Apex Legends Hack yethu yenziwe yasebenza kuba izixhobo zethu azizizo zonke izinto.
Sizamile ukulungelelanisa inkqubo yokufaka ukuqinisekisa ukuba nabasebenzisi be-novice banokufikelela kwi-Apex Legends Hack, kwaye siziva ngathi siphumelele kuloo nto. Awunakukhathazeka malunga nokuba ikhompyuter yakho ityiwa ziintsholongwane ezifihlakeleyo okanye nokuba iakhawunti yakho ivaliwe kuba i-Gamepron ibonelela kuphela nge-100% engafumanekiyo kwaye ikhuselekile kubo bonke abasebenzisi bethu. Nantoni na oziva ngathi ifunekayo ukuze uphumelele umdlalo kwiMidlalo ye-Apex, yazi nje ukuba i-Apex Legends Hack iya kubandakanya yonke into oyifunayo.
I-Apex Wall Hack (i-ESP)
Ulwazi lomdlali we-Apex ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
I-Apex Item ESP eneefilitha
Isilumkiso sotshaba oluphezulu
Imowudi yokutsiba okuphezulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
I-Apex ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Isiphelo sokubuyisa umbuyekezo
Ngokufanelekileyo Ipepe yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa i-Apex Legends Player ESP ukugcina umkhondo weendawo zotshaba, kunye nokubiza izoyikiso ezinokubakho kwiqela lakho!
Ukuchonga abadlali yimpepho xa usebenzisa i-Apex Legends ESP, njengoko sikunika ukuthanda kwamagama, imivalo yezempilo, kwanemigama yabo.
Fumana eyona mpango ilungileyo ngaphandle komzabalazo! Sebenzisa into yethu i-ESP ngezihluzi kukuvumela ukuba ubone ezona zixhobo zilungileyo kwisakhiwo ngasinye.
Unokufumana kuphela i-Apex Legends Aimbot apha kwiGamepron, kwaye lukhetho olucacileyo kwabo bafuna ukuphucula ekuphuculeni kwabo.
Umkhondo we-Apex Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Landa umkhondo weebhulethi zakho njengaye nawuphi na umzingeli oyintloko ngokusebenzisa i-Apex Legends Bullet Track feature. Ukugqibelela kokubini okuphakathi kunye nokufutshane!
Iintshaba azinakuze ziphinde zikubambe, njengoko sikhusela ngohlobo lwezilumkiso zotshaba (nanini na xa zikufutshane okanye zijolise kuwe).
Imowudi yokutsiba okuphezulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Ukuwa kwiindawo eziphakamileyo ezibulalayo ngumoya opholileyo xa i-Apex Legends Hack yethu yenziwe yasebenza, njengoko i-Super Jump Mode iya kukugcina uchuma.
I-Apex ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Sinezinto ezininzi eziluncedo ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwe-Apex Legends Hack, kubandakanya ukuBekwa phambili kwamathambo kunye nolunye useto olunokuqwalaselwa.
I-Apex aimbot iitshekhi ezibonakalayo
I-Apex Legends yethu ye-Aimbot ibandakanya iitshekhi ezibonakalayo, eziza kukunceda uqinisekise ukubulala kwaye ubone apho iintshaba zifihle khona.
Ukufumana kwakhona kunokukubulala ngexesha lokudubula, njengoko kunokuba nefuthe elibi ekuchanekeni kwakho. Yisuse ngokupheleleyo nge-Apex Legends Recoil yembuyekezo!
Yiba nguMdlali oBalaseleyo we-Apex Legends kwiPlanethi
Ngaba uzama ukuba ngoyena mdlali woyikekayo we-Apex Legends owakhe wabona iplanethi yethu? Nangona ngokuqinisekileyo kukho abantu abanesiqalo sentloko, ukusebenzisa i-Apex Legends Hack yeyona ndlela ilula yokufikelela kule nkqubo. Awuzukuphumelela kuphela kwaye uphumelele phantse kuwo wonke umdlalo, kodwa uya konwaba ngelixa usenza! Sonke sifuna ukuba ngabaphumeleleyo ebomini, kwaye izixhobo ezikhoyo kwiGamepron zikunceda ukufezekisa kanye loo nto.
I-Apex Legends Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
Amanqaku amaNqaku iAimbot
I-Apex Legends ESP kunye neWall Hack
Ezinye ii-Apex Legends Hacks kunye nokukhohlisa
I-Apex Legends Hacks zethu zithandwa ngesizathu esihle kakhulu, kwaye sesinye sokuba abanye ababoneleli bemithi basithiyile. Asizami kunye nokupompa izixhobo ngokukhawuleza njengoko oko kuya konakalisa umgangatho ekufuneka siwenzile. Xa ujolise ekwenzeni amakhulu ezixhobo ezahlukeneyo kwaye uzama ukwenza iihacks kuwo wonke umdlalo ngaphandle, umgangatho uya kugungqa. I-Apex Legends Hack yile yokuba besiyila ubuncinci unyaka, khange sikhawulezise nantoni na kwaye sakha sakhupha izixhobo ezinomgangatho engqondweni.
Kungenxa yoko le nto siqhubeka ukuba ngoyena mbonisi uthandwayo we-Apex Legends Hacks kwi-Intanethi kuba siyayazi into efunwa ngumdlali weqonga. Siyayiqonda indlela ekunokuba nzima ngayo ukuphulukana nokuphela komdlalo we-Apex Legends, ke saye sagqiba kwelokuba siphuhlise i-Apex Legends Hack eya kuthi incede abasebenzisi bethu bayiphephe loo nto.
I-aimbot iphantse yahlala imisela iziphumo zomdlalo wakho, nokuba unazo zonke iimpawu ezenziweyo okanye hayi. I-Apex Legends yethu yeAimbot ixhotyiswe ngezinye zezona zinto ziluncedo macala onke, ezinje ngeAutom-Aim / yoMlilo kwaye ujonge egudileyo ukugcina ababukeli bekwimva kwakho. Awufuni kuthatha nawaphi amathuba kumdlalo oye walwa nawo uninzi lwamanye amaqela, kwaye inyani yokuba umdlalo ngamnye unokuba mde nje yongeza ukubaluleka kokuphumelela.
Uyakunkqonkqoza iintloko zabantu kude nomgama ohlekisayo xa i-Apex Legends Aimbot yenziwe, kwaye awudingi nokuba nompu ukuze wenze njalo. Besisoloko sicinga ukuba abadlali banobuninzi bokuba bhetyebhetye kwi-Apex Legends, kodwa ukusebenzisa i-Apex Legends yethu ye-Aimbot izakuzisa ukuguquguquka kwakho kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo. Yithathe kwiingcali, siyazi ukuba yintoni esebenzayo- kwaye le Apex Legends Aimbot iyasebenza!
I-Apex Legends Wall Hack kunye ne-ESP zifana nosana, ngengqondo yokuba besikhula kwaye sikhulisa iWall Hack yethu kangangexesha elithile. Nangona yonke i-ESP kunye neWall Hack odibana nayo iza kwenza into efanayo, unikezelo lwethu lwahluke kakhulu-siyakuvumela ukuba ubone zonke iintlobo ze-ESP, uninzi lwazo olunokukunceda uchonge ubungakanani besoyikiso sakho Umchasi ngu. Nokuba ufuna ukubona ukuba yeyiphi umpu umntu awusebenzisayo okanye ingakanani impilo asele nayo, ungasebenzisa i-Ape Legends ESP kunye neWall Hack ukufumana ulwazi olubalulekileyo ngokusebenzisa indawo eqinileyo kunye ne-opaque.
Asizukuwenza iimpazamo kulo mgca womsebenzi, njengoko isiliphu esinye sinokuthetha ukuba ban banokubakho kubasebenzisi bethu. Zonke ii-hacks zethu azifumaneki ngokupheleleyo kwaye azizukubeka emngciphekweni, kucacile ukuba i-Apex Legends ESP kunye neWall Hack ziyafana.
Iintshaba zakho ziya kuba nobuqhetseba ngamanye amaxesha, zibaleke kuwe ngokubhabha kwaye ziphoswe kukufa ngee-intshi ezimbalwa. Sisebenzisa i-Apex Legends Hacks ukuba sizive siphakamile ngelixa sidlala, kodwa kwenzeka ntoni xa umntu emtyibilizi ngokwaneleyo ukuba abaleke kuwe? Ungasebenzisa inqaku leNyawo ukubona apho utshaba luya khona ngokulandelayo, njengoko imikhondo yeenyawo iya kuhamba emva kwabo kwaye ikukhokelele kwindawo yabo. Oku kuluncedo kakhulu xa ulandela intshaba, okanye kuya kufuneka wazi apho abantu bokugqibela befihle khona kwisangqa sokugqibela. Yiba ngumphathi we tracker kwaye ufumane abachasi bakho ngokulula, nokuba bakuphi.
Umonakalo omde kunye neempawu zomgama zombini ziluncedo kakhulu kwilungelo labo. Inqaku loMonakalo oMkhulu liya kukuvumela ukuba upakishe inqindi enzima kunabo bonke abachasi bakho, kwaye inqaku lomgama liya kukuvumela ukuba ubone ukuba zide kangakanani iintshaba zakho (kunye nezisongelo ezinokubakho).
I-Gamepron iya kuhlala ingoyena mphuhlisi ubambekayo ojikeleze indawo, uninzi lwethu siqinisekile ngalo. Ngelixa abanye abaphuhlisi bexakekile bejija izithupha zabo okanye besenza ii-hacks ezikumgangatho osezantsi, sizama ukuphucula izixhobo esele zikhutshiwe kwaye sigqibelele ezo singakazikhuphi. I-Apex Legends Hack iza ixhotyiswe ngokuthandwa kweNqaku lokususa, kunye nezinye izinto eziluncedo ongaziqhelanga ukuzibona xa ukhohlisa ngokwesiko. Sitshintsha indlela osondela ngayo kugqirha kwi-Apex Legends ukuba ibe ngcono, kwaye kuyacaca ukuba iidrama kwihlabathi liphela ziyayithanda into esizama ukuyifeza.
Ngaphandle kwento onokucinga ukuba uyayifuna ngokubhekisele kwi-Apex
Iintsomi iiHacks, i-Gamepron iya kukusebenzela kangangoko sinako. Akunyanzelekanga ukuba uthelekise okwesibini xa uthenga ii-Apex Legend hacks, kuba ekugqibeleni zivela kumthombo othembekileyo! Abalandeli be-Apex Legends bayavuya, kuba ekugqibeleni kukho umboneleli oqeqeshiweyo we-Apex Legends Hacks kunye nokukhohlisa.
Apks Hacks imibuzo
Kutheni i-Apex Legends Hacks zethu
Ngaba ukhetha ukusebenzisa i-free hack, okanye ukuhlawula into ongayi kuyifumana kwenye indawo? Yintoni eyenza iiNgcaciso zeNgcaciso zeNgcaciso yaMgangatho wethu ihluke kumgangatho ongene kwinkqubo yophuhliso, eyenye into abangayikhathalelanga abanye abaphuhlisi. Ukuba ufuna olona luvo lubalaseleyo, akukho mboneleli ungcono kune Gamepron.
Kutheni i-Apex Legends yethu yeAimbot
Awufuni kuphosa ifoto ngelixa udlala i-Apex Legends, kuba loo nto iza kukuvulela ithuba lokuhlaselwa ngabachasi bakho. Sebenzisa i-Apex Legends Aimbot kwaye uqiniseke ukuba zonke izithonga zakho ziyishiya ibhayara ngeenjongo zokubulala! Nokuba oyena mdlali unesakhono unokudutyulwa nge-Apex Legends Aimbot esebenzayo.
Kutheni i-Apex Legends yethu ye-ESP
I-Apex Legends eyi-ESP elungileyo iya kukunika uncedo olukhulu, njengoko ubona kwiindawo eziqinileyo nezingacacanga kuvula ithuba elingaphezulu. Unokubona apho iinkampu zilalisa abantu ukuba balale kwaye baziphathe ngokufanelekileyo, okanye ungasebenzisa umsebenzi we-ESP ukuchonga eyona nto iphambili ngaphambi kokungena kwisakhiwo. Kutheni uchitha ixesha lakho xa usika amanqatha nge-Apex Legends ESP kunye neWall Hack?
Kutheni i-Apex Legends yethu iWallhack
Ngababini ecaleni kwe-ESP, i-Apex Legends Wall Hack iya kukuvumela ukuba ubize iindawo zotshaba ngokulula. Akunyanzelekanga ukuba ubabone, njengoko unokujonga nje kwiindonga eziqinileyo kunye ne-opaque ukufumana indawo yomchasi-emva koko ungababulala okanye ulumkise abo udlala nabo malunga nengozi.
Kutheni i-Apex Legends yethu yeNorecoil
Ukuphinda ubuye kuyingxaki kwabanye, nangona sonke kufuneka sizame ukuyilahla nanini na sinakho. Kungenxa yoko le nto umsebenzi weNoRecoil uye waba lukhetho oluthandwayo kubo bonke abasebenzisi bethu, njengokuchaneka kokuchaneka kwakho okuchaphazeleke ngokungafanelekanga ngu "ukubuyisa" kuyacaphukisa. Yilahle kunye nenkohliso yethu ye-Apex Legends!
Ungazikhuphela njani ezona hacks ziphambili ze-Apex?
Ukuba ufuna ukukhuphela ezona ndawo ziphambili ze-Apex Legends Hacks ezikhoyo kwi-Intanethi, iWinThat War yeyona ndawo ilungileyo. Siyinkonzo ekhethekileyo kwaye awunakufumana ezi zinto (zinikezelwa kulo mgangatho uphakamileyo) naphina! Joyina iklabhu ekhethekileyo ngokuthenga isitshixo semveliso namhlanje.
Kutheni le nto ii-Apex Legends zakho zibiza kakhulu kunezinye
Kufuneka sibize into eyongezelelweyo xa uthelekisa ixabiso le-Apex Legends my kwabanye, ikakhulu kuba siyinkonzo ekhethekileyo kwaye sinenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka. Njengayo nayiphi na enye into ebomini, ububodwa buza kufuna amaxabiso aphezulu-iindaba ezimnandi kukuba sisafikeleleka.
Sigcina izinto eziguquguqukayo ngokunikezela ngezitshixo zemveliso zabathengi bethu ezisebenza mihla le, ngeveki, nangenyanga. Nokuba ucinga kangakanani ukuba uza kukopa, siza kuba nelona khetho lilungileyo lemveliso oza kulikhethela.
Kuhle Ipepe yimfumba Iimbonakalo